I-Ellicott Delivers Series 370 Dragon® Dredge Yokusebenza Kokulima Shrimp eMexico - Ellicott Dredges
I-Ellicott Idiliva Uchungechunge lwe-370 Dragon® Dredge Yokusebenza Kokulima Shrimp eMexico
U-Ellicott usanda kuletha futhi waqala i-Series 370 Dragon® dredge yepulazi lezimfanzi ogwini lwasePacific lwaseMexico.
I-Ellicott 370 dredge ifaka ipompo engu-12” x 10”, amandla afakiwe angama-416 HP futhi ingafinyelela ukujula okuphezulu kwamamitha ayi-10 (33 ft).
I-dredge yatholwa ngumsebenzi wokulima izimfanzi, owakhetha i-Ellicott® dredge ngenxa yedumela layo lokuthembeka nokuqina ngaphansi kwezimo ezinzima. I-dredge izosetshenziselwa ukususa i-sediment futhi igcine isiteshi solwandle esingenisa amanzi emachibini abo epulazi lezimfanzi.
Ngenxa yekhwalithi yayo nobulula bokusebenza nokulungiswa, i-Ellicott 370 ingenye yezindawo ezidumile kakhulu eMexico. U-Ellicott ubelokhu ekhona eMexico amashumi eminyaka amaningi, ngosizo lwezobuchwepheshe lwasendaweni olunikezwa ngabameleli babo abagunyaziwe e-Makisur SA.